Lily Dunn's Sins of My Father Review: Surviving a Cult | Boky - Boky maneran-tany
Enin-taona i Lily Dunn rehefa nandao ny vadiny sy ny zanany roa ny rainy, nandao ny tokantranony tany Londres, nefa tsy nilaza ny fiverenany. Nividy tapakila tokana ho any India izy, nandeha tany amin'ny ashram any Pune niaraka tamin'ny vehivavy iray nifanena taminy tao amin'ny klioban'ny strip iray, izay te-hampahafantatra azy ny mpampianatra azy, Bhagwan Shree Rajneesh, fantatra amin'ny anarana hoe Osho. Niorim-paka tao amin'ny lahatsoratra tsy hay hadinoina nataon'i Granta tamin'ny 2016, ny Sins of My Father dia lasa fahatsiarovana ny fiainana roa: ny an-drainy, kentron'ny tantara an-tsehatra lehibe, ary ny fiezahany manokana hizaka ny fanaintainana navelany teo amin'ny fiainany. mifoha. Dunn dia manoritsoritra ny fahatapahan'ny fatoram-pianakaviana ho toy ny "io fahatapahan'ny sidina io." Tantara mampalahelo tokoa izy io, saingy misy hatsarana ao amin'ny fahazavany mangatsiaka sy mangatsiaka.
Ny rain'i Dunn - nomena anarana tamin'ny voalohany, fa taty aoriana dia nantsoina hoe "Dada" na "raiko", izay misy fiantraikany maharitra, na akaiky na lavitra - dia velona tao amin'ny kulto Rajneesh, ary ny ankamaroan'ity tantara ity dia mahakasika ny fotoana naha-ray azy. . mpivavaka amin'ny Bhagwan. Nanatevin-daharana ireo tandrefana fotsy hoditra mpanankarena maro izy izay nahita trano tao amin'ny fampianaran'i Bhagwan sy ny kaominina. Tamin'ny taona 2018, ny andian-tsarimihetsika Netflix Wild Wild Country dia nitantara ny fifindran'ny sekta ho any Oregon any Etazonia, nampiditra ny sannyasins miloko volom-boasary ho an'ny taranaka vaovao. Tsy manao tsinontsinona ny antson'ny sekta i Dunn ary maneho fiaraha-miory mahagaga amin'ireo mpanaraka azy, raha jerena ny korontana naterany tamin'ny fiainany manokana.
Ny kolontsaina dia singa iray amin'ny piozila sarotra. Atambatra ho toy ny mpitsikilo ny ambiny
Saingy mipoitra hatrany hatrany ny fahatezerana vaovao. Ny rainy, mpanoratra sy tonian-dahatsoratra, dia nanandrana nanoratra ny lahatsorany ara-panahy voataonan'i Bhagwan; Nanambara i Dunn fa “ zara raha zakany ny fako sy ny fisafotofotoana ary ny fandosirana. Ireo teny tsy miraharaha ireo. Ny hatezerany, mahery amin'ny fifantohana tony, dia tonga amin'ny fara tampony rehefa mamaritra ireo ankizy izay nihalehibe teo ambanin'ny didy "fitiavana maimaim-poana" izay, raha ny tsara indrindra, dia tsy nanao zavatra firy ho an'ny fahasalamany ary, ny ratsy indrindra, dia namela kolontsaina. ny tsy firaharahiana sy ny fanararaotana. Rehefa 13 taona i Dunn, dia niara-nipetraka tamin-drainy tany Italia izy ary lehilahy be taona kokoa no nikarakara azy. Nitodika tany amin'ny rainy izy mba hangataka torohevitra, mazava ho azy fa very hevitra sy very hevitra noho ny fandrosoan-drainy. Nanoro hevitra ny rainy fa mety hianatra zavatra izy, ka hanova ny sainy ho "saika ho toy ny fanehoan-kevitra ariana" rehefa fantany fa voan'ny gonorrhea ilay lehilahy.
Sins of My Father dia ny fiezahan'i Dunn hihaona amin'ny rainy tsy azo ianteherana. “Tena tia azy foana aho”, hoy ny nosoratany. De-romanticization ity boky ity, ary singa iray amin'ny piozila be pitsiny ny fivavahana. Izy no misintona ny ambiny ho toy ny mpitsikilo miasa amin'ny raharaha mangatsiaka efa hadino hatry ny ela, ary na dia hafa be aza ny toerana misy azy, dia nampahatsiahy ahy ny fahatsiarovan'i Laura Cummings ao amin'ny Chapel Sands izany. Miresaka amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana i Dunn, mahita taratasy tranainy, ary mijery sarin'ny fianakaviana mba hahitana izay fomba mety holazain'izy ireo aminy ankehitriny. Mikaroka tononkalo sy Shakespeare, mianatra Jung sy Freud, ary mianara momba ny trauma sy ny fiankinan-doha. Mihodina amin'ny fisaintsainana izy, manomboka amin'ny fiafaran'ny androm-piainany ka hatrany am-piandohana, mandroso sy miverina, manampy sosona hafa isaky ny mandeha. Nandritra io dingana sarotra io, dia nahita tsiambaratelo mahatsiravina momba ny fahazazan-drainy izy, ny zava-nitranga nandritra ny fotoana nandehanany sy ny fahombiazany, ary izay nitarika ny fahafatesany taorian'ny fisotroan-toaka nandritra ny fotoana ela. Ny filazalazana ny fihenany dia tantara mazava momba ny fiankinan-doha araka ny tadidiko namaky azy io.
Rehefa mitady hahatakatra ny rainy i Dunn, dia miezaka ny hahatakatra ny tenany izy. Ny dikanteny hoe A Daughter, a Cult, a Wild Unraveling, dia manambara mazava fa mamerina ny toerany teo amin'ny tantara izy. Nanoratra izy fa ny anadahiny dia niala tamin'ny rainy tamin'ny farany, nanapaka azy, mba hamerana ny fanaintainany manokana, fa i Dunn kosa dia nisafidy ny handinika ny ampahany kely amin'izy ireo. Mampientam-po indraindray. Azoko an-tsaina fa maro ny olona hikorontana amin'ny hevitra hahitana ny tantara feno sy tsy misy dikany momba ny fisarahan'ny ray aman-dreniny, ohatra, saingy misy ny mason'ny mpanara-maso tsy miangatra. Izy dia mendri-kaja sy manaja, izay toy ny zava-bita ho azy. Dunn dia tsy manozongozona ny sarin'ny rainy ho toy ny maherifo simba na oviana na oviana, saingy nanafaka ny tenany tamin'ny adidy hamela azy izy. Ny otan'ny Raiko dia porofo manamarina ny fahasimbana, saingy amin'ny farany dia mivaky toy ny fahitana miadana ny fahafahana.
Sins of My Father: Daughter, Cult, a Wild Unraveling by Lily Dunn navoakan'i Weidenfeld & Nicolson (£16,99). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Sokajy Vaovao farany Tags Dunn, ray, boky, Lily, FAMERENANA, antoko, fahotana, velona, una Ticket navigation
Ry misterin'ny efitrano mavo